पहिलो डिजिटल मार्केटप्लेस नेपालमा सुरु - Horizon Khabar
पहिलो डिजिटल मार्केटप्लेस नेपालमा सुरु
काठमाडौ । इलान्स डिजिटल मिडिया प्रालिले सबै विज्ञापन, ब्रान्डिङ र मार्केटिङ आवश्यकताहरूको लागि नेपालको पहिलो डिजिटल मार्केटप्लेस eLancedigitalmedia.com सुरु गरेको छ । इलान्सले वेबसाइट डिजाइन, सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन, सोसल मिडिया मार्केटिङ, गुगल विज्ञापन, मल्टिमिडिया लगायत सेवाहरु प्रदान गर्दछ ।
Previous articleनीलकण्ठ न.पा. धादिङ द्वारा १ अर्ब २२ करोड ९१ लख २३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन
Next articleतपाईंको बालबालिकाको ओच्छ्यानमा पिसाब फेर्ने बानी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ
कुल बाजेटको ३६ % मात्रै विकासको खर्च
आजदेखि आदर्श लघुवित्तको आईपीओ खुल्यो
सेयर बजार आगामी हप्तादेखि सातामा ६ दिन खुल्ने